Vera နဲ့ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အလေးချိန် ရောက်နေပြီလို့ ပြောလိုက်တဲ့ မြန်မာစပါးအုံး အောင်လအန်ဆန် – Lat Khat Than
By လက်ခတ်သံPosted on June 25, 2019
Brandaon Vera ကျွန်တော့ကို စိန်ခေါ်တာ ခုဆိုရင် သုံးလတိတိပြည့်ပါပြီ။ အဲဒီစိန်ခေါ်တဲ့ ညက ကျွန်တော်ဟာ ၂၀၅ ပေါင် ရှိရာက စိန်ခေါ်ချိန်နောက်ပိုင်းကတည်းက ဂျပန်မှာ ရှိမယ့်ပွဲအတွက် တစ်ဖြည်းဖြည်း ဝိတ်တက်အောင်လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ည ညစာစားအပြီးမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ၂၂၅ပေါင်နဲ့ Light Heavyweight ပွဲအတွက် လိုအပ်တဲ့ အလေးချိန် အတ်ိအကျဖြစ်နေပါပြီ။ ထိုးသတ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားတော့ မဟုတ်သေးပေမဲ့ အောက်တိုဘာလမှာတော့ မြန်မာ့စပါးအုံးရဲ့ အကောင်းဆုံး အနေအထားဖြစ်နေဖို့ ကြိုးစားလေ့ ကျင့်နေကြပါတယ်။
အမြဲချစ်ခင်အားပေးပြီး သတိရဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ချစ်သောပရိသတ်များရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့အတူ ဒီခရီးကို ဖြတ်သန်းခွင့်ရတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အမြဲကျေးဇူးတင်လျက် ဆက်ကြိုးစားနေပါမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။
It’s been3months since Brandon Vera challenged me. On that night, I weighed 205 pounds and since then, I’ve been slowly and steadily gaining good weight for our show down in Japan 🇯🇵 . Tonight after dinner I am at 225 pounds, the exact weight for our Light Heavyweight match. Not quite in fight shape yet but we will be the best version of the 🇲🇲 🐍when October comes. Thank you for all your love, support and prayers. I’m truly blessed and super grateful for you for being apart of my journey. 🙏🏽🥰
Ref: Aung La Nsang(Burmese Python)
Previous post “ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်က စိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိတာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါးပိတ်သွားပြီ” ဟု SNLD ပြော
Next post “မည်သူမဆို တစ်နာရီ စာဖတ်ရင် ငွေ(၁၀၀၀)ရမည့် အစီအစဉ် ရန်ကုန်မြို့မှာစတင်”